လူကြိုက်များသော ကိုရီးယားရုပ်ရှင်များအကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » လူကြိုက်များသော ကိုရီးယားရုပ်ရှင်များအကြောင်း
Posted by shwemoenyo on Jun 14, 2010 in Other - Non Channelized |4comments
သရုပ်ဆောင်ကောင်းလို့ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးသောအဖြေတွေကိုရတယ်
မင်းသားမင်းသမီးရဲ့ရုပ်ရည်က တို့နိုင်ငံက မင်းသားမင်းသမီးနဲ့ဘာကွာလဲစဉ်းစားတယ်
ကွာခြားတာကို သွားတွေ့တယ် သူတို့မင်းသားမင်းသမီးက ရုပ်ကိုချထားတာကိုသွားတွေ့တယ် အဓိကက ခေါင်းဆောင်မင်းသားမင်းသမီးတွေမှာ မင်းသမီးတွေဟာရုပ်ရည်လှပသလို ရုပ်မှာမာန်မရှိတာကိုသွားတွေ့ရတယ်
ပုရိသတ် ရင်ငြိမ်းနေအောင်လို့ ရုပ်ကိုမာန်ချထားတယ်
သူတို့မျက်နှာကိုအလှ၇ယ်လို့ အလွန်အကျွံမပြင်ဘဲနဲ့ မာန်ကင်းအောင်ပဲ ရုပ်ကိုထားတယ်သင့်သလောက်ပဲပြင်ထားတယ်
အ၀တ်အစားဆိုလဲ သူတို့ကိုမြင်ရင် သူတို့အ၀တ်အစားထက်
(ဂွီဂျင် ဂွီဒေါက် ဇတ်လမ်းဆိုရင်)သူတို့ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုနဲ့သူတို့ မျက်နှာလေးကိုပဲလူက သတိထားကြည့်မိတယ်
ဆင်းရဲသားတိုင်း စုတ်ဖတ်ဖတ်မ၀တ်ပါဘူး ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရန်မတွေ့ပါဘူး
မြန်မာ မင်းသားမင်းသမီးအများစုကို သရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ အ၀တ်အစားအလှအပထက် မျက်နှာကိုမာန်ချထားစေချင်တယ်
အသားအရေ ညက်ညောနေတာပဲ မိတ်ကပ်လိမ်းချယ်မှုကိုလျှော့စေချင်တယ်
အပြင်မှာပဲ မောင်နှမချင်း (ဘယ်လောက်ချစ်ချစ်)
တခုခုစိတ်မကောင်းရင် အကိုနဲ့နှမ ဖက်မငိုပါဘူး
shwemoe nyo has written4post in this Website..
i'mahuman but likeasnail.
View all posts by shwemoenyo →
မင်းသား မင်းသမီးဆိုတာထက် ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်ကလည်း ကွာတာကိုဗျ….. မြန်မာဇာတ်လမ်းတွေဆို သိတယ်မဟုတ်လား… ဇာတ်အိမ်ကအရမ်းခိုင်တာလေ… တစ်ခါလာလည်း ချစ်ကွဲညားရယ်… တစ်ခါလာလည်း ပေါတောတော ဟာသကားတွေရယ်…. ကြည့်ချင်စရာကိုမရှိဘူး(တချို့ဇာတ်လမ်းကောင်းများကို မရည်ရွယ်ပါ.) ကိုရီးယားကားတွေကို မင်းသား မင်းသမီးထက် ကျွန်တော်ကတော့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလွန်းတဲ့အခါ ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်… ဥပမာ IRIS.
ကိုရီးယားကားတွေကို လူတွေအတော်များများကြိုက်ကြတယ်နော်…စိတ်ဝင်စားမှုလည်းကောင်းပါတယ်… ဇာတ်လမ်းတွေကလည်း စွဲဆောင်မှုရှိတော့ ကြည့်ပြီးရင်းကြည့်ချင်ဖြစ်တတ်တယ်….အချိန်တော့ ပေးရတာပေါ့နော်…အလုပ်အကိုင်တွေလည်း ပျက်တတ်တယ်….
ကိုးရီးယားကားတော်တော်များများက ကောင်းကြပါတယ် မြန်မာကားများနဲ့ ဆီနဲ့ရေလိုပါပဲ ဘာမှကိုမဆိုင်ဘူး ကိုးရီးယားကို အထင်ကြီးလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော် မြန်မာရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးတွေကလည်း ကိုးရီးယားကို လိုက်ပြီးတော့ အတုလိုက်ခိုးနေကြတာကိုက ရယ်စရာတစ်ခုဖြစ်မနေဘူလား တစ်ခါတစ်လေ မြန်မာဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်ရင် ပေါ့ပျက်ပျက်ကြီးဖြစ်နေတယ် ကိုးရီးယားဇာတ်ကားတွေထဲကလို မင်းသားမင်းသမီးတွေက ရုပ်ရည်လေးတွေက နုနုလေးတွေ ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရင်လည်း ကြည့်လို့အရမ်းကောင်းတယ် ဒီကတော့ဖြင့်အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး ရုပ်ကြမ်းကြီးတွေနဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားအဖြစ်တွေနဲ့သရုပ်ဆောင်ထားကြတယ် ရယ်စရာကြီးဖြစ်မနေဘူးလား
ကိုးရီးကားကောင်းတာတွေလည်းရှိသလို မကောင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ် ဥပမာ ချစ်စံအိမ်မှာ အွန်စော စိတ်ဆိုးတဲ့ပုံစံက ဘယ်ကိုးရီးယားမင်းသမီးစိတ်ဆိုးဆိုး ဒီအမူအာယာပါပဲ မျက်လုံးကြီးပြူးပြီး ပါးစပ်က ဟစိဟစိနဲ့ ဒါက ပုံစံခွက် ထဲက ပေါ့ မြန်မာကားတွေထက်ကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် သုံးပွင့်ဆိုင်တွေချည်းပဲ ရုပ်လှတာလေးနဲ့တာ့ အားလုံးမကောင်းလောက်ပါဘူး ကိုးရီးယားကားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သူတွေ မြ၀တီမှာပြသွားဖူးတဲ့ အိုးရှင်း၊ တစ်မိုးအောက်၊ နောက်ပြီးတော့ ဟိုတယ်ချစ်သူ လိုကားမျိုးတွေ မကြည့်ဖူးကြဘူး ဒီလိုကားမျိုးကမှ တကယ်ကောင်းတဲ့ကားတွေပါ။